Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Jackie Gleason | Jimmy Fallon - Fikarohana momba ny vatana teraka
Jimmy Fallon amin'ny maha-teraka indray ao amin'ny Zandriva an'i Jackie Gleason
Rehefa Jimmy Fallon dia nahomby tamin'i Jay Leno The Tonight Show tamin'ny 2014, ny sary fampidirana ny fampisehoana dia nohavaozina. Gaga aho fa nampiasa sary mainty sy fotsy tao amin'ny tanànan'i New York i Jimmy, narahin'ny "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" napetraka tamin'ny volana feno volana. Tena mpankafy an'i Jackie Gleason aho ary fantatro fa nindrana ny sary volana avy amin'ny kilasin'i Gleason i Jimmy Honeymooners Tantara mitohy amin'ny tele. Eo amin'ny sehatra misy azy dia manana modely hazo kely misy ny lanitra Skyline any New York izy ary sarimihetsika miloko ny lanitra Skyline any New York.
Rehefa nijery an'i Jimmy nandalo ny monologue-ny aho dia tsapako fa nitovy tamin'ny Gleason tanora sy mahia i Jimmy. Ny mahaliana dia samy nampiasa anaram-bosotra ireo mpanao hatsikana roa, John Herbert "Jackie" Gleason sy James Thomas "Jimmy" Fallon. Apetraho amin'ny sary ny fitomboanao.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, ilay mpitarika fanahy na fanahy fanahy izay naneho ny fahaizany manao lalao marina teo amin'ny fiainana, dia nanamafy fa i Jimmy Fallon no vatana vaovao indray an'ny "Lehibe", Jackie Gleason. Ny mahaliana, Gleason dia mpamaky haisoratra momba ny paranormal. Mahaliana ny mahita raha misokatra amin'ny foto-kevitra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray i Jimmy Fallon.
Nanao vazivazy momba an'i John Kerry i Jimmy indray mandeha, milaza fa Kerry dia toa olona efa eo amin'ny volantsika. Jimmy dia nanondro ny fitoviana teo amin'i John Kerry sy Andrew Jackson. Mifanindran-dàlana, ity dia tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray izay natolotr'i Kevin Ryerson voalohany. Raha te hahalala bebe kokoa dia mandehana any amin'ny: Andrew Jackson | John Kerry Reincarnation Case
Marihina fa ny montana mainty sy fotsy New York City ary Honeymooners Ny sary famantarana volana eo am-piandohan'ny seho an'i Jimmy dia azo jerena ho toy ny taratry ny fiainana sy ny vanim-potoana niainan'i Jackie Gleason, raha toa kosa ny sary miloko an-tanàna izay manaraka sy ny lokon'ny tanàna eo am-pelatanana dia azo jerena fa maneho ny fiainam-piainan'i Gleason ankehitriny toa an'i Jimmy Fallon.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana matanjaka eo amin'ny tanora Jackie Gleason sy Jimmy Fallon.
Ny fiainana taloha talenta: Ny asan'ny hatsikana Jackie Gleason dia mitohy ao amin'ny persona an'i Jimmy Fallon.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Nodimandry i Jackie Gleason tamin'ny 24 Jona 1987, raha teraka tamin'ny 19 septambra 1974 i Jimmy Fallon, fito taona teo ho eo izay. Toy izany, io dia maneho tranga fahatongavan'ny nofo nofo, izay ahafahan'ny fanahy iray manentana vatana nofo mihoatra ny iray amin'ny fotoana iray.
Jereo ny Horonan-tsarimihetsika momba ny Reellarnation viralida: Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao